ကြွက်သားတက်အောင် လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန် မွေးမြူရမယ့် အကျင့် (၅) ခု - For her Myanmar
ကြွက်သားတက်အောင် လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန် မွေးမြူရမယ့် အကျင့် (၅) ခု
မွေးရခက်မှန်းသိပေမဲ့ မွေးသင့်ပါတယ် :3
Gym စဆော့တဲ့အချိန် ကြွက်သားတက်ချင်လို့ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆော့တဲ့လူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ? (ကိုယ်တိုင်လည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးနော် :P) ပြီးတော့ ကြွက်သားဆိုရင် တိရစ္ဆာန်ကြွက်ကိုပဲ ပြေးပြေးမြင်တာ ငါတစ်ယောက်တည်းလားကွ။
အမှန်တော့ ကြွက်သားတက်တယ်ဆိုတာ နှင်းတို့မြင်ဖူးနေကျ အဖုအထစ်တွေနဲ့ အကြီးကြီးတွေကိုပဲ ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်… ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီတွေမရှိတော့တဲ့အခါ သူ့နေရာနဲ့သူ အဖုအထစ်လေးတွေ ဖြစ်လာတာကို ခေါ်တာပါ။ ဆိုတော့ ဒီလို ကြွက်သားတက်အောင် လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးက အများကြီးအထောက်အကူ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ဘယ်လို အကျင့်လေးတွေ မွေးရမလဲဆိုတာ တစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်နော်…
အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးပြီးချင်း အချိန်မှာ အဆီစားရင် အဆီ၊ အသားစားရင် အသား စသည်ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာအကျိုးသက်ရောက်တာကြောင့် မစားကြတဲ့လူက များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြွက်သားတက်ချင်တဲ့လူတွေက်တော့ မစားဘဲ နေလို့ မရပါဘူးနော်။ အသားတက်စေမယ့် ပရိုတင်းအပြင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုလည်း စားလို့ရပါတယ်။ ကြွက်သားတက်ချင်တယ်ဆိုရင် မကြာခဏ စားပေးရပါမယ်။ မကြာခဏဆိုတဲ့နေရာမှာ တစ်နေ့ကို ထမင်း ၆နပ် ၇ နပ် စားနေစရာမလိုဘဲ ပုံမှန်စားနေကျ ထမင်း ၃ နပ်ကိုပဲ သေချာစားပြီး ကြားမှာ ပရိုတင်းရှိတ်ကို များများ သောက်ပေးရမှာပါ။
ကြွက်သားတက်ဖို့အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်က ပရိုတင်းဓာတ်ပါ။ ဥပမာ – ကိုယ့်ကြွက်သားကို အုတ်နံရံအနေနဲ့ သတ်မှတ်ကြည့်လိုက်။ ဒီလိုအုတ်နံရံကြီး တဖြည်းဖြည်းကြီးလာဖို့အတွက် ပရိုတင်းအုတ်ခဲတွေ အများကြီးလိုအပ်တယ်မလား? ဒါကြောင့် ပရိုတင်းရှိတ်တွေ၊ အသားနဲ့ နွားနို့နဲ့ တခြားအသားဓာတ်တက်စေမယ့် အစားအစာတွေကို များများသာစားပါ။
Related Article >>> အမိုက်စားဘော်ဒီဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်လေးရောက်အောင် လိုက်နာရမယ့် နည်းလမ်း (၆)သွယ်
အသား၊ ဥနဲ့ နွားနို့တွေ စားသောက်ရုံနဲ့တော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံ မထွက်နိုင်ပါဘူးနော်။ အဲဒါကြောင့် ဖြည့်စွက်စာအနေနဲ့ ငါးကြီးဆီ၊ Creatine Monohydrate ပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းရှိတ်တွေကိုလည်း များများသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အမေတွေက သူတို့ကလေးတွေ အရွက်စားမစားကို ဘေးနားမှာ တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ စောင့်ကြည့်နေသလိုပဲ ကြွက်သားတက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ အဓိကအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့အစာချေစနစ်က ကောင်းဖို့အရေးကြီးတာမို့ အမျှင်ဓာတ်များများပါတဲ့ အရွက်တွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။
Related Article >>> ကိုယ်အလေးချိန်ကို အစားအသောက်လေးနဲ့ ထိန်းကြမယ်..
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ အစားတွေ ဖြည့်စွက်စာတွေ အသေစားပြီး မအိပ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကြွက်သားတက်ဖို့အိပ်မက်ကို တာ့တာပြလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အလုပ်တွေပေးတာများပြီး ပြန်တည်ဆောက်ရတဲ့အချိန်မှာ လုံလုံလောက်လောက် အနားမပေးဘူးဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံကို ရဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာကိုယ် ကျစ်လျစ်ဖို့ဆိုတာခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျစ်လျစ်ပြီးသား ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြွက်သားတွေတက်အောင်လုပ်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်က ပိုပြီးတော့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဆိုပေမဲ့ ဒီလိုအခြေခံအချက် ၅ ချက်ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ ထိန်းသိမ်းဖို့ ပိုလွယ်သွားပြီမို့ ကဲ.. ဖိုက်တင်း ယောင်းလေးတို့ရေ…
References : t-nation, shape
မှေးရခကျမှနျးသိပမေဲ့ မှေးသငျ့ပါတယျ :3
Gym စဆော့တဲ့အခြိနျ ကွှကျသားတကျခငျြလို့ဆိုပွီး ရညျရှယျခကျြနဲ့ ဆော့တဲ့လူ ဘယျနှဈယောကျရှိလဲ? (ကိုယျတိုငျလညျး မဟုတျခဲ့ပါဘူးနျော :P) ပွီးတော့ ကွှကျသားဆိုရငျ တိရစ်ဆာနျကွှကျကိုပဲ ပွေးပွေးမွငျတာ ငါတဈယောကျတညျးလားကှ။
အမှနျတော့ ကွှကျသားတကျတယျဆိုတာ နှငျးတို့မွငျဖူးနကြေ အဖုအထဈတှနေဲ့ အကွီးကွီးတှကေိုပဲ ချေါတာမဟုတျပါဘူးနျော… ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီတှမေရှိတော့တဲ့အခါ သူ့နရောနဲ့သူ အဖုအထဈလေးတှေ ဖွဈလာတာကို ချေါတာပါ။ ဆိုတော့ ဒီလို ကွှကျသားတကျအောငျ လကေ့ငျြ့နတေယျဆိုရငျတော့ ဒီဆောငျးပါးလေးက အမြားကွီးအထောကျအကူ ဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။ ဒါဆို ဘယျလို အကငျြ့လေးတှေ မှေးရမလဲဆိုတာ တဈခကျြကွညျ့ကွရအောငျနျော…
အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပွီးပွီးခငျြး အခြိနျမှာ အဆီစားရငျ အဆီ၊ အသားစားရငျ အသား စသညျဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျမှာအကြိုးသကျရောကျတာကွောငျ့ မစားကွတဲ့လူက မြားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကွှကျသားတကျခငျြတဲ့လူတှကျေတော့ မစားဘဲ နလေို့ မရပါဘူးနျော။ အသားတကျစမေယျ့ ပရိုတငျးအပွငျ ကာဗိုဟိုကျဒရိတျကိုလညျး စားလို့ရပါတယျ။ ကွှကျသားတကျခငျြတယျဆိုရငျ မကွာခဏ စားပေးရပါမယျ။ မကွာခဏဆိုတဲ့နရောမှာ တဈနကေို့ ထမငျး ၆နပျ ၇ နပျ စားနစေရာမလိုဘဲ ပုံမှနျစားနကြေ ထမငျး ၃ နပျကိုပဲ သခြောစားပွီး ကွားမှာ ပရိုတငျးရှိတျကို မြားမြား သောကျပေးရမှာပါ။
ကွှကျသားတကျဖို့အတှကျ အခွခေံလိုအပျခကျြက ပရိုတငျးဓာတျပါ။ ဥပမာ – ကိုယျ့ကွှကျသားကို အုတျနံရံအနနေဲ့ သတျမှတျကွညျ့လိုကျ။ ဒီလိုအုတျနံရံကွီး တဖွညျးဖွညျးကွီးလာဖို့အတှကျ ပရိုတငျးအုတျခဲတှေ အမြားကွီးလိုအပျတယျမလား? ဒါကွောငျ့ ပရိုတငျးရှိတျတှေ၊ အသားနဲ့ နှားနို့နဲ့ တခွားအသားဓာတျတကျစမေယျ့ အစားအစာတှကေို မြားမြားသာစားပါ။
Related Article >>> အမိုကျစားဘျောဒီဆိုတဲ့ ပနျးတိုငျလေးရောကျအောငျ လိုကျနာရမယျ့ နညျးလမျး (၆)သှယျ
အသား၊ ဥနဲ့ နှားနို့တှေ စားသောကျရုံနဲ့တော့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပုံစံ မထှကျနိုငျပါဘူးနျော။ အဲဒါကွောငျ့ ဖွညျ့စှကျစာအနနေဲ့ ငါးကွီးဆီ၊ Creatine Monohydrate ပါဝငျတဲ့ ပရိုတငျးရှိတျတှကေိုလညျး မြားမြားသောကျပေးသငျ့ပါတယျ။
အမတှေကေ သူတို့ကလေးတှေ အရှကျစားမစားကို ဘေးနားမှာ တုတျတဈခြောငျးနဲ့ စောငျ့ကွညျ့နသေလိုပဲ ကွှကျသားတကျခငျြတယျဆိုရငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပဲ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။ အဓိကအားဖွငျ့ ကိုယျ့ရဲ့အစာခစြေနဈက ကောငျးဖို့အရေးကွီးတာမို့ အမြှငျဓာတျမြားမြားပါတဲ့ အရှကျတှကေို စားပေးသငျ့ပါတယျ။
Related Article >>> ကိုယျအလေးခြိနျကို အစားအသောကျလေးနဲ့ ထိနျးကွမယျ..
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျ၊ အစားတှေ ဖွညျ့စှကျစာတှေ အသစေားပွီး မအိပျဘူးဆိုရငျတော့ ကွှကျသားတကျဖို့အိပျမကျကို တာ့တာပွလိုကျပါ။ ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျကို အလုပျတှပေေးတာမြားပွီး ပွနျတညျဆောကျရတဲ့အခြိနျမှာ လုံလုံလောကျလောကျ အနားမပေးဘူးဆိုရငျ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပုံစံကို ရဖို့ခကျခဲပါလိမျ့မယျ။
ခန်ဓာကိုယျ ကဈြလဈြဖို့ဆိုတာခကျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကဈြလဈြပွီးသား ခန်ဓာကိုယျကို ကွှကျသားတှတေကျအောငျလုပျပွီး ထိနျးသိမျးထားဖို့အတှကျက ပိုပွီးတော့ခကျခဲတတျပါတယျ။ ဆိုပမေဲ့ ဒီလိုအခွခေံအခကျြ ၅ ခကျြကိုလိုကျနာမယျဆိုရငျတော့ ထိနျးသိမျးဖို့ ပိုလှယျသှားပွီမို့ ကဲ.. ဖိုကျတငျး ယောငျးလေးတို့ရေ…
Tags: Everyday, fish, Fitness, green vegetables, habits, Healthy, living, muscles, oil, protein, sleep